Magaca Trump oo Dadka maraykanka iyo Ardayda iskuulayduba u yaqaanaan nacas | Biyoguurenews.com
Home Wararka Magaca Trump oo Dadka maraykanka iyo Ardayda iskuulayduba u yaqaanaan nacas
Magaca Trump oo Dadka maraykanka iyo Ardayda iskuulayduba u yaqaanaan nacas
Wiil yar oo iskuulay ah oo loo bahdilay magaca awoowgii – Trump – ayaa waxa uu ka qeybgeli doonaa khudbadda sanadlaha ah ee uu Madaxweynaha Maraykanka Talaada jeedinayo.
Joshua Trump, oo ah 11 sano jir ayaa ka soo jeeda magaalada Wilmington ee Delaware, ayuusan jirin wax xiriir ah oo kala dhexeeyay Madaxweyne Donald Trump.
Waalidiintiisa ayaa sheegay in ardayda ay isku fasalka yihiin ay ugu yeeran doqon aan waxba garanayn, magaca uu Trump la wadaago awgii.
Senatarrada iyo xildhibaannada Kongareeska ayaa martidooda ku casuuma dhismaha Capitol, iyadoo labada xisbina ay doonayaan inay dadka u diraan bayaanno siyaasadeed oo kala duwan.
Hase ahaate Joshua, waxaa uu ka mid yahay 13ka qof ee sida khaaska ah ay u martiqaaden Madaxweynaha iyo marwadiisa.
Walidiintiisa, Megan Trump iyo Bobby Berto, ayaa warbaahiinta u sheegay in bahdilka uu wiilkooda ku bilawday sanadkii 2015, markaas oo Madaxweyne Trump uu shaaciyay in uu xafiiska u tartamayo.
Marka ay ogaadeen in wilkooda la dhibaateynayo waxay ka saareen iskuulkii uu wax ka baranayay oo waxay ka dorbideen in muddo sanad ah ay guriga wax ku baraan inta uu ku biirayo dugsiga dhexe.
Waxay ku rajoweynayeen in aan lagu dhibaateyn doonin iskuulka cusub ee la geeyay balse nasiib darro musiibadii uu ka soo cararay ayuu haddana la kulmay.
”Waxa uu sheegay in uu naftiisa neceb yahay, sidoo kalena uu neceb yahay magaca awoowgii, marwalbana uu murugaysan yahay, mana doonayo in uu sidaasi dareemo mar dambe,” Hoyadii Ms Trump ayaa sidaasi sheegtay.
Warbixin ka soo baxday Aqalka Cad ayaa sheegaysa, maadaama Joshua loo bahdilay magaca uu la wadaago Madaxweynaha, haddana waxaa uu u ”mahadcelinaya marwada koowaad iyo qoyska Trump taagerada ay u muujiyeen”.
Yaa kale oo la marti qaaday?
Dadka kale ee Madaxweynaha iyo Marwada koowaad ay casuumadda u fidiyeen waxaa ka mid ah nin ka bedbaaday toogashadii macbadka synagogue ee Pittsburgh,oo aheyd goob ay yahuuda ku cibaadeystan, iyo haweeney da’ yar oo ka soo kabanaysa daroogo ay aad u isticmaashay, iyo qoyska lamaane ku nafwaayay toogasho bishii aynu soo dhafnay uu u geystay qof si sherci darro ah dalka ku joogay.
Wax diidi karo malaha in farriin siyaasadeed ay ka dembeyso dhammaan martida madaxweynaha uu soo xushay. Guud ahaan, waxaa uu doonayaa in uu caddeeyo in go’aan adag uu ka qaatay argagixisada iyo socdaalka.
Balse senatarrada iyo xubnaha Aqalka Kongareeska ee ka soo jeeda labada xisbi siyaasadeed ee ugu waa weyn ayaa fursadan u isticmaalaya inay diraan fariin ay iyagu xusheen.
Dad badan oo xisbiga Dimuqraadiga ah iyo kan Jamhuuriga ah waxay marti ka yihiin labada dhinac ee muranka xayndaabka xuduudaha – oo ah aasaaskii ololaha doorashadii madaxweynennimada Trump ee sannadka 2016, taas oo sii wadday siina murgisay murankaas.
Jimmy Gomez iyo Bonnie Watson Coleman ayaa labadooduba lagu martiqaaday shaqaalihii hore ee Trump National Golf Club, kuwaas oo la sheegay inay yihiin kuwo aan sharciyeysnayn xilligii ay ka shaqeynayeen halkaas.
“Madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay in dawladdu hoos u dhigto muddo shan todobaad ah iyada oo ay muhaajiriintu u adeegsanayaan argagixisada dalka iyo aasaaskii dambiga qaranimadeena iyo xasilloonida,” Ms Coleman ayaa warbixin sidaa ku soo qoray.
“isla xilligaas, hoggaamiyeTrump waxa uu hoggaaminayay shirkad si weyn ugu tiirsaneyd shaqada adag ee muhaajiriinta aan sharciyeysneyn oo aan aniga oo ka mid ahaaba, si aan u u ilaaliyo goobaha dalxiiska iyo nadiifinta goobaha cagaarkaah.”
Senator-ka Dimuqraadiga ah Jeff Merkley, ee lagasoo doorto gobolka Oregon, ayaa inan iyo hooyadeed ka keenay dawladda Guatemala kuwaas oo kala maqnaa muddo laba bilood ah xuduudda koonfureed sannadkii hore.
“Siyaasaddan kala-guurka ah ee caruurta waxay ka timid meel mugdi iyo dhib ah oo ku taalla wadnaha maamulka,” Mr Merkley ayaa sidaa ku yiri hadal uu soo saaray, isaga oo intaa ku daray in martidiisa ay gcaawin doonaan dalka.
Qaar ka mid ah Democratiska ayaa sidoo kale ku casuumay dadka jinsigoodii muddo hore iska beddelay, si iyaguna dhankooda u hadlaan. Waxaana ka mid ah Tavion Dignard, oo ah nin jinsigiisa iska beddelay kana shaqaynayey ciidamada Badda ee Mareykanka muddo afar sano ah, iyo Logan Ireland, oo ah sarkaal ciidanka cirka ah oo kasoo shaqeeyey Afgaanistaan.
Dhinaca kale kala qaybsanaanta siyaasadeed , xisbiga jamhuuriga Marsha Blackburn iyo Tim Burchett ayaa si wadajir ah ugu martiqaaday lamaanihii uu wiilkoodu ku dhintay shilka baabuur, kuwaasi oo ah o magangalyo doonayaal aan sharciyaysnayn oo ka yimid Mexico.
Xildhibaannada Jamhuuriga ah ee Andy Biggs iyo Chip Roy ayaa soo kaxaystay qaar ka mid ah madaxda xuduudaha. Mr Biggs wuxuu ku casuumay wakiilka xuduudaha ee Art Del Cueto, halka Mr Roy uu keenayo Brandon Judd, oo madax ka ah ciidamada ilaaliya xadka.
Sannadkii lasoo dhaafay waxay soo xidheen maryo madmadaw si ay taageero ugu muujiyaan ololaha anna sidoo kale, Dimoqraadiyiin badan ayaa martiqaaday dad ka yimid barnaamijyada Daca iand Dream ee muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee la keenay Maraykanka.
Previous articleGudoomiye Ciro Oo Si Adag Uga Hadley Deynta 80-ka Milyan Ah Ee Xukuumadii Siilanyo Wareejisay , Kuna Baaqey
Next articleBangigii Berbera oo Dibudhis iyo qalabayn Lagu wado iyo rajada shaqadii bangigaasi oo dib usoo noolatay